I-Galaxy Watch Active 2: Imininingwane nokuqaliswa okusemthethweni | Izindaba zamagajethi
AbakwaSamsung bakuthuthukisa kakhulu ukutholakala kwabo emakethe yokugqoka. Ingxenye yalokhu iphathelene nobubanzi bayo obuvuselelwe, okusishiye newashi namasongo amaningana kuze kube manje kulo nyaka. Umkhiqizo waseKorea ukusizile ukufika kweGalaxy Note 10 ukuletha iwashi layo elisha. Imayelana ne-Galaxy Watch Active 2, ebethuliwe ngalo msombuluko.
I-Galaxy Watch Active 2 yindlalifa elandelayo ukuthi basishiya ngoFebhuwari. Inkampani ithuthukise izici ezithile zayo, njengokungeniswa kwemisebenzi emisha yezempilo. Ngaphezu kwalokho, basishiya noshintsho oluncane ekwakhiweni kwaleli washi, elibizelwe impumelelo entsha ngeSamsung.
Kulokhu, ukwakheka kuhlala kucishe kufane. AbakwaSamsung bethule kulo okubizwa ngokuthi yi-touch bezel (Touch Bezel). Ngenxa yaso, umsebenzisi unikezwa ithuba lokuzula kusixhumi esibonakalayo ngokuthinta umphetho, kepha ngaphandle kokwenza empeleni. Uhlobo lokuzulazula kokuthinta, ukukubiza kanjalo. Ngaphandle kwalokho azikho izinguquko, ngaphandle kokuthi ikhishwa ngosayizi ababili.
I-Samsung Galaxy Watch Active, sihlaziya i-smartwatch eshibhile se-Samsung
1 Imininingwane Galaxy Watch Active 2
2 Intengo nokwethulwa
Imininingwane Galaxy Watch Active 2
Sahlangana no osayizi ababili abahlukene kule Galaxy Watch Active 2, yize imininingwane yayo ihlala icishe ifane ezicini eziyinhloko. Kepha kukhona umehluko ebhetri, isibonelo. Amawashi amabili avezwa njengenketho ephelele kakhulu kule ngxenye yemakethe. AbakwaSamsung basishiya newashi elisebenza kahle, elinomklamo omuhle futhi bethule imisebenzi emisha nejabulisayo. Lokhu ukucaciswa kwayo:
Khombisa: Ama-Super AMOLED 1,4 amayintshi noma ama-intshi angu-1,2 ngokulungiswa kwamaphikseli angama-360 x 360
Umseshi: Exynos 910
I-RAM: 1,5 GB (Izinhlobo ze-LTE kuphela) - 768 MB kokunye
Ukuxhumana: LTE, WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, Bluetooth 5.0. I-NFC
Isistimu esebenzayo: Tizen
Izinzwa: Electrocardiogram, Accelerometer, Barometer, Gyroscope, HR Sensor, Illumination Sensor
Ibhethri: 340/247 mAh
Ukumelana: Isikrini sokumelana nezempi se-MIL-STD-810G esinengilazi yeGorilla Glass DX +
Kule Galaxy Watch Active 2 entsha sithola izindaba ezimbili ezinhle, maqondana nemisebenzi. Ziputshiwe emasontweni ambalwa edlule, futhi zikwenza kucace ukuthi abakwaSamsung bayiqaphele i-Apple Watch, ngoba iyimisebenzi emibili ekhona esizukulwaneni sakamuva samawashi e-Apple. Imayelana ne-electrocardiogram kanye nokutholwa kokuwa.
I-electrocardiogram ngumsebenzi wenkanyezi kulesi sizukulwane esisha sewashi. Ngenxa yalomsebenzi, kungenzeka ukuthumela imizwa kagesi enhliziyweni, ukuthola ukufundwa okujulile futhi ukwazi ukuthola okungajwayelekile, okufana ne-arrhythmias enhliziyweni. Kuyisici esithole ukubuyekezwa okukhulu kuma-Apple Watch, kanye nokusiza ukusindisa izimpilo zabanye abantu.
Ngakolunye uhlangothi, sithola ukutholwa kokuwa ku-Galaxy Watch Active 2. Isebenza ngenxa ye-accelerometer yewashi. Kuhloselwe ukuthola uma kukhona ukushaqeka noma ukuwa okungazelelwe ngumsebenzisi, futhi uma kunesidingo, wazise izimo eziphuthumayo. Ngakho-ke kungaba yinto esetshenziswa kakhulu kubasebenzisi.
I-Samsung Galaxy Watch Active 2 yethulwa ngezinhlobo ezimbili, kuya ngosayizi, njengoba sibonile kuzincazelo zayo. Zizokwethulwa futhi ngemibala ehlukahlukene, ngezitayela ezahlukahlukene zamabhande, ukuze umsebenzisi ngamunye athole imodeli evumelana kahle nesitayela noma ukunambitheka kwabo. Inkampani iqinisekisile izintengo zosayizi ababili baleli washi:
Imodeli yobubanzi obungama-40mm ibiza ngentengo Amadola ka-279,99 (cishe ama-euro angama-250 ukushintsha)
Uhlobo lwewashi olunezindleko zamacala angama-44 mm Amadola ka-299,99 (cishe ama-euro angama-268 ukushintsha)
Mayelana nokwethulwa, kulindeleke ukuthi zifike ngenyanga kaSepthemba, okungenani eMelika. Ukwethulwa kwayo ezweni uzoba ngoSepthemba 27, yize isikhathi sokubhuka sizovulwa ngoSepthemba 6. Cishe lokhu kuyinto yomhlaba wonke, ngakho-ke singalindela bona ngezinsuku ezifanayo eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » I-Galaxy Watch Active 2: I-smartwatch esisha se-Samsung
I-Mailrelay: Ithuluzi lokwenza imikhankaso yakho yokuthengisa ye-imeyili